Toetra ara-batana amin'ny muscovite sy phlogopite
zavatra Muscovite Phlogopite
Loko tsy misy loko, volontsôkôla, mena mavokely, maitso landy fantsona tanimanga 、 volontany ow maintso maitso 、 mainty
Mangarahara% 23 --87.5 0--25.2
famirapiratany fitaratra, perla ary landy Fanjelanjelatra fitaratra, eo akaikin'ny famirapiratan'ny vy, famirapiratry ny menaka
Hamafisan'ny Morse 2 ~ 3 2.5 ~ 3
Fomba attenuatedoscillator / s 113 ~ 190 68 ~ 132
Density (g / cm2) 2.7 ~ 2.9 2.3 ~ 3.0
Hafanana hafanana / J / K 0.205 ~ 0.208 0.206
Fitondra-tena maharitra / w / mk 0.0010 ~ 0.0016 0,010 ~ 0,016
Coefficient elastika (kg / cm2) 15050 ~ 21340 14220 ~ 19110
Herin'ny diélectrika / (kv / mm) amin'ny ravina matevina 0.02mm 160 128
Vovoka mika ambaratonga Huajing, izay ampiasaina indrindra amin'ny plastika injeniera mba hampitombo ny modulus miondrika sy ny fahalalahana; hampihenana ny fihenan-dàlana. Amin'ny sehatry ny plastika misy ny vokatra elektronika, aorian'ny fampidirana mika dia afaka voadio kokoa miaraka amina endrika izy ireo. afaka manatsara ny fanoherana ny toetr'andro amin'ny vokatra plastika izy io, ka ny plastika injeniera dia mahazaka hafanana sy fahasamihafana eo amin'ny tontolo iainana; manatsara be ny insulation mba hiantohana ny fahamendrehana amin'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra avo lenta; Izy io dia afaka manatsara ny fihenan'ny vokatra plastika manokana ihany koa.
Ny mika volamena matetika mavo, volontany, volontany mainty na mainty; ny famirapiratry ny vera, ny faravodilanitra dia perila na famirapiratry ny metaly metaly. Ny mangarahara amin'ny Muscovite dia 71.7-87.5%, ary ny phlogopite dia 0-25,2%. Ny hamafin'ny Mohs an'ny Muscovite dia 2-2.5 ary ny an'ny phlogopite dia 2.78-2.85.
Ny elastika sy ny toetran'ny Muscovite dia tsy miova rehefa mafana amin'ny 100.600C, fa ny tsy fahampiana rano, ny toetra mekanika ary ny herinaratra dia miova aorian'ny 700C, very ny elitika ary manjary marefo, ary ny rafitra dia potika amin'ny 1050 ° C. rehefa eo amin'ny 700C eo ho eo ny Muscovite dia tsara kokoa ny fampisehoana herinaratra noho ny Muscovite.
Noho izany, ny mika volamena dia ampiasaina amin'ny plastika izay tsy manana takiana avo amin'ny loko fa ny fanoherana ny hafanana avo.
Fampiharana ny Mica ao amin'ny PA
Ny PA dia misy heriny ambany sy fihenan'ny hafanana ambony amin'ny maripana maina sy ambany, izay misy fiatraikany amin'ny fitoniana dimensional sy ny fananana elektrika. Noho izany dia ilaina ny manova ny lesoka PA amin'ny tanjona.
Mica dia mpameno fotony tsy voajanahary tsara ho an'ny plastika, izay manana ny toetran'ny fanoherana ny toetr'andro tsara, ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny harafesin'ny simika, ny henjana, ny insulation elektrika sns. Izy io dia manana rafitra mikorontana ary afaka manatsara ny PA amin'ny lafiny roa. Taorian'ny fanovana ny tany dia nasiana mika tamin'ny resina PA, ny toetran'ny mekanika sy ny fitombon'ny hafanana dia nihatsara, ny fihenan'ny famolavolana dia nihatsara ihany koa, ary ny vidin'ny famokarana dia nihena be.
Teo aloha: Mika tany maina